Weerar Ajaaniib lagu dilay oo ka dhacay Itoobiya [Fahfaahin]
ADDIS ABABA, Ethiopia - Dabley hubeysan ayaa lagu waramayaa in ugu yaraan Shan ruux oo labo kamid ah ay Ajaaniib yihiin ay ku dishay ismaamul goboleedka Oromada ee dalka Itoobiya.
Weerarkaan oo dhacay abaare 7:30 am subaxnimo maanta oo Talaado ah ayaa laga soo wariyay gobolka Wollega oo ku yaalla Galbeedka wadanka aan badda lahayn ee ugu dadka badan Afrika.
Mas’uuliyiinta ayaa nan wali soo bandhigin fahfaahin dhameystiran oo ku saabsan siduu u dhacay weerarkaasi, hadii ay jiraan howlgalo ka dambeeyay iyo dalalka ay kasoo jeeda shisheeyaha la khaarijiyay.
Hasayeeshee, taliska booliska ayaa u sheegay warbaahinta maxaliga ah ay wadaan baaris ku saabsan kiiskaan, iyaga oo tibaaxay in ay ku howlan yihiin sidii ay xaqiiqada u soo bandhigi lahaayeen.
"Waa xili hore, sidaasi awgeed waxaad u sheegtaan dadka in uu jiro weerarka, dadka la dilayna ay Ajaaniib ku jiraan ... balse xogta oo dhameystiran naga suga," ayuu yiri taliska Booliska.
Gobolka Oromada oo xuduud la leh ismaamul goboleedka Soomaalida waxaa ka jirtay xaalad deganaansho la’aan tan iyo sanadkii hore, inkasta oo bilooyinkii u dambeeyay la dareemayay xasilooni aan cago badan lahayn.
Weerarkii saaka ayaa imaanaya iyada oo dadka Itoobiyaanka ah ay wali maankooda ka guuxayso burburka diyaaradii Ethiopian Airlines ee 10-kii bishaan Maaj, taasoo ay ku dhinteen 157 ruux oo rakaab ah.
Dhibanayaasha shilkii diyaaradeed ee Itoobiya oo magdhow helaya
Afrika 17.03.2019. 10:32
Shirkada ayaa sheegtay in ay lacagta ay ku bixineyso muddo 18 bilood ah.
Musiibo ku habsatay qoys reer Canada ah oo kusoo wajahnaa Kenya
Afrika 16.03.2019. 05:34
Qoysaska dhibanayaashii Ethiopian Airlines oo mudaaharaaday
Afrika 14.03.2019. 15:32
Sanduuqa madow ee burburka diyaarada Itoobiya oo la helay
Afrika 11.03.2019. 18:57
Xildhibaan xaaskiisa iyo caruur ku waayey shilka Ethiopian Airlines
Caalamka 11.03.2019. 12:57
Mas'uul katirsanaa xafiiska Khayre oo ku dhintay burbur diyaaradeed
Soomaliya 10.03.2019. 16:31
Dalalka ay u dhasheen rakaabkii ku dhintay shilka Ethiopian Airlines [Akhri]
Afrika 10.03.2019. 15:23
Deni oo Ethiopian Airlines kala hadlay hirgelinta duulimaadyo joogto ah
Puntland 12.06.2019. 20:28